काठमाडौँ, १८ कात्तिक । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनशन बस्दै आएका । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सोमबारदेखि १७ औँ अनशन सुरु गर्ने भएका छन् । २०६९ असार २१ देखि विगत ७ वर्षमा उनी पटकपटक अनशन बस्दै आएका छन् ।
अघिल्ला संस्करणका अनशनहरुमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले नेपाल चिकित्सक संघको प्रदर्शनमार्गस्थित भवनबाट अनशन सुरु गर्न लागेका हुन् ।
डा. केसीले १६‌औं चरणको अनशन इलाममा गरेका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य रहेका डा.केसीले यसै साता एकाबिहानै अनशन बस्ने स्थान अवलोकन गरेर गएका थिए ।
यस्ता छन् डा. केसीको १७ औँ अनशनका ६ बुँदे मागहरुः
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने ।